Intshayelelo: indlela-Enye clutch licandelo ngomatshini ukuphumeza umsebenzi self-iklatshi. Yeyona yinxalenye esisiseko electromechanical drive ngokusebenzisa utshintsho isantya okanye icala njengokujikeleza iinxalenye osebenzayo okanye egxothiweyo. Ifom uxhulumaniso yahlulwe: uqhagamshelo ezingundoqo, uqhagamshelo lizulu, uqhagamshelo pulley, uqhagamshelo wheel ityathanga, njl .. Owona msebenzi walo ukuthintela umva, ukubeka echanileyo, ukudluliselwa torque okanye torque ahlabayo. Ngoko ke, ezikwabizwa ngokuba backstop yayo okanye indlela-uyawathena ...
ndlela-Enye clutch licandelo ngomatshini ukuphumeza umsebenzi self-iklatshi. Yeyona yinxalenye esisiseko electromechanical drive ngokusebenzisa utshintsho isantya okanye icala njengokujikeleza iinxalenye osebenzayo okanye egxothiweyo. Ifom uxhulumaniso yahlulwe: uqhagamshelo ezingundoqo, uqhagamshelo lizulu, uqhagamshelo pulley, uqhagamshelo wheel ityathanga, njl .. Owona msebenzi walo ukuthintela umva, ukubeka echanileyo, ukudluliselwa torque okanye torque ahlabayo. Ngoko ke, zaso ngokuba backstop okanye indlela enye iibheringi.
Yesicelo: auto transmission oluzenzekelayo, ngesithuthuthu isiqalo zombane, izixhobo umatshini, ukupakishwa oomatshini, oomatshini bokushicilela, ukukhanya oomatshini kunye nezinye transmission ngoomatshini.
Previous: Track mqengqeleki
Okulandelayo: ball Aluminium
iklatshi For Motorcycle
Iqulunqwe Cup mqengqeleki bamba
Honda Foreman Sprag bamba
One Way iklatshi
Sprag iklatshi Ukunikela
Sprag ehamba iklatshi
Starter Sprag iklatshi